11+ Các món ngon từ thịt chân giò heo ăn cả tuần không ngán | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
11+ Các món ngon từ thịt chân giò heo ăn cả tuần không ngán | Excitinghochiminhcity
Nguruve yegumbo chinhu chinovaka muviri, chiri nyore kugadzirira uye nyore kutenga. Kune nzira dzisingaverengeki dzekugadzira gumbo renguruve mundiro dzakawanda dzakasiyana. Pamwe chete Digifood discover zvinonaka ndiro kubva nyama yenguruve gumbo Idya svondo rese usingafinhi pano!
1 1. Nguruve yegumbo nyama yakabikwa mukutevedzera civet
2 2. Korean yakabikwa nyama yenguruve yegumbo nyama
3 3. Gumbo renguruve rakabikwa nemishonga yekuChamhembe
4 4. Nguruve yegumbo yakabikwa mumafuta asina mafuta
5 5. Coke braised pork gumbo nyama
6 6. Pickled pork gumbo nehove muto
7 7. Braised pork gumbo ne soy muto
8 8. Poached poach gumbo nemishonga
9 9. Braised pork gumbo ne bamboo shoots
10 10. Dzvinya tsoka
11 11. Mazano ekusarudza zvakanaka nyama yenguruve yegumbo
1. Nguruve yegumbo nyama yakabikwa mukutevedzera civet
Nguruve yegumbo yakabikwa mukutevedzera civet ndiro yakajairika mumatireyi emuchato mune dzimwe nzvimbo. Kubika kutevedzera civet inzira yekubika yevanhu vekuNorth. Nyama yakafuma, inonhuhwirira, uye muto wakanyorova muzvinonhuwira, izvo zvakakwana mumamiriro ekunze echando. Gumbo renguruve rakabikwa ne civet rinowanzodyiwa kana kuchipisa, rinogona kupihwa nemupunga unopisa, vermicelli kana chingwa.
Mufananidzo: Tran Thu
2. Korean yakabikwa nyama yenguruve yegumbo nyama
Kana iwe uri fan hombe yekimchi cuisine, iwe zvechokwadi haugone kubatsira asi kuziva yakakurumbira stewed yenguruve gumbo nyama dish. Yakabikwa nyama yenguruve yegumbo nyama ine zvinonhuwira zvakadai sekinamoni, cardamom, apuro dzvuku, apuro, paro … Iyo yakabikwa yenguruve yegumbo nyama yakapfava uye ine nyoro, kwete chete inonaka asiwo inovaka muviri, nokuti kune zvakawanda zvakanaka zvinhu zvehutano.
Korean yakabikwa nyama yenguruve yegumbo nyama inofanirwa kupihwa nekimchi nemiriwo. Iwe unogona zvakare kugadzirira mamwe madhishi epadivi senge gungwa remupunga mabhora, kimchi soup, mazai akabikwa, nezvimwe.
Mufananidzo: Han Yori
3. Gumbo renguruve rakabikwa nemishonga yekuChamhembe
Tichitaura nezvezvokudya zvinonaka zvakagadzirwa negumbo renguruve nyama, hazvibviri kusataura nezvegumbo renguruve rakabikwa nemishonga yeNorthern. Ichi chikafu chinovaka muviri zvakanyanya, kunyanya chinodiwa nevakura nekuda kwekunhuhwirira kwemushonga wekuMaodzanyemba, nyama yakapfava uye iri nyore kudya.
Maitiro ekugadzira gumbo renguruve yakabikwa nemushonga wekuMaodzanyemba kunoda zvakawanda zvekushandisa uye nekuchenjerera kugadzirisa kudzivirira kurasikirwa nekudya kwenyama. Nekudaro, kana yakabikwa nemazvo, iwe unenge uine isingadzivisiki inonaka yakabikwa nyama yenguruve gumbo nemushonga wekuMaodzanyemba!
4. Nguruve yegumbo yakabikwa mumafuta asina mafuta
Kana iwe uchida kudya nyama yenguruve gumbo rine hutano vhezheni, unogona kutaura nezve nzira yekubika nemhepo fryer. Iyi nzira yekubika inobatsira kudzikisa huwandu hwakanyanya hwemafuta, matanho ekugadzirisa zvakare akareruka uye usazvinetse nekupwanya mafuta mukicheni. Huwandu hwemafuta uye mvura kubva munyama ichiyerera ichidzika unogona kugadzira muto wekunyudza kana kumwaya pamusoro penyama mushure mekuchekerera kuti unyorovese muto urinani.
Kuti uite nyama yenguruve yegumbo yakakangwa inonaka uye inonhuhwirira, unofanirwa kuisa pfungwa pane marinated zvinonhuwira. Kana iwe usina kugadzirira-yakagadzirwa sosi package, gadzira zvinongedzo zvakaita seoyster muto, uchi, zvinonhuwira zvishanu, chili muto, nezvimwewo. Mushure mekuita marinating kwemaawa angangoita 1-2, unoiisa mumhepo fryer uye woisa grill. kupisa. kwapera.
5. Coke braised pork gumbo nyama
Coca braised meat ndechimwe chezvikafu zvinonaka zvakagadzirwa negumbo renguruve ine nzira itsva uye yakasarudzika yekugadzira. Iko kusanganiswa kunonzwika kusinganzwisisike asi kwakanyatso kukodzera, kunounza zvinoyevedza, zvakapfuma ndiro, inoyevedza ruvara rwemapapiro emapete. Coca ine kutapira kusinganzwisisike, kana yakarukwa nenyama, inogadzira musanganiswa unonamira weglue, uyo unonakawo zvakanyanya kana isaswa panyama. Kana iwe uri pakudya kweshuga, unofanirwa kuderedza huwandu hweCoke uye kuwedzera huwandu hwemvura yakasvibiswa uchiri kuchengetedza glue.
6. Pickled pork gumbo nehove muto
Kana iwe uchida kurwisa kubhowekana paZuva reGore Idzva, iwe unofanirwa kuita nekukurumidza gumbo renguruve nemuto unotapira uye unovava. Chimedu chega chega chenyama chinorungwa, mafuta akajeka, ganda rinoshanduka, rinodyiwa nekimchi, banh chung kana banh tet.
Pickled pork gumbo zvakare iri nyore nzira yevakadzi vasina nguva yakawanda yekubika. Ingoita kamwe chete, inogona kuchengetedzwa kwemazuva 2-3, uyezve, iyo nguva yakareba nyama yasara, iyo yakawanda yehove yehove inotora, iyo inonaka yakawanda.
Mufananidzo: Vu Thuy Hang
7. Braised pork gumbo ne soy muto
Nyama yegumbo renguruve inoshambidzwa, yakatsvuka uye yozoshongedzwa nesoya muto kusvikira yapfava. Iyo nyama yakapfava, iyo inonyanya kunakidza uye iyo yakawanda yakarungwa, zviri nani inofamba nemupunga kana vermicelli. Chikamu che soy muto uye muto une zvakawanda zvinovaka muviri unogona kuchengetwa pamwe nezvimwe ndiro kana kubikwa muto.
Mufananidzo: Dang Hau
8. Poached poach gumbo nemishonga
Kana iwe wakaneta nenyama yakabikwa nguva dzose, usatya kuishandura nemiriwo yakabikwa nyama yenguruve yegumbo, inonhuhwirira nesinamoni, nyeredzi anise nemimwe mishonga. Kunyanya, ndiro iyi inodyiwa inotonhora sezvinobvira, saka unogona kubika nyama yakakura, wozoichengeta mufiriji uye uidye zvishoma nezvishoma. Nyama yegumbo yakabikwa nemiriwo yenguruve yakabikwa nemuriwo mbishi uye zvikafu zvakavava zvakaita sekimchi, yero pickled radish inonaka kwazvo.
Mufananidzo: Mat Be
9. Braised pork gumbo ne bamboo shoots
Zvizhinji zvinonaka zvinonaka kubva kune nyama yenguruve yegumbo zvinoda kubikwa kwenguva yakareba kuitira kuti nyama ive nyoro uye ine nyoro. Izvo zvakafanana zvinofamba-famba munguruve plk ne bamboo tsoka, ndipo paunonyanya kuonda, izvo zvinotapira kubva munyama zvichabatikana mumabamboo.
Zvichienderana nekuti ndiro yedivi iri mupunga kana vermicelli, unogona kuwedzera kana kuderedza huwandu hwemvura. Iwe unogona kuwedzera mamwe mvura kuti udye soup yenoodle kana vermicelli. Kana iwe usina nhungirwa nyowani dze bamboo, unogona zvakare kutsiva iwo neakaomeswa bamboo nhungirwa, usakanganwe kunyura uye kugeza nhungirwa dze bamboo usati wabika!
Mufananidzo: Hoang Thuy
10. Dzvinya tsoka
Chikwata chinoda kunwa, kunyanya vanoda kunwa doro, havagone kufuratira ndiro iyi. Nyama yakasvinwa inonhuwira nekunhuhwirira kwelemongrass, mashizha eremoni, kunhuhwirira kwekunzwa uye sesame. Chidimbu chega chega chenyama chinoshandiswa nemashizha emuonde, mashizha evhavha, akanyikwa nehove inotapira uye inovava muto kana chili muto hazvifananidzi. Cherechedza kuti unofanira kugadzira ndiro iyi uye kuidya masikati, nokuti kana iwe ukaisiya kwenguva yakareba, haichazove inonhuhwirira.
11. Mazano ekusarudza zvakanaka nyama yenguruve yegumbo
Nguruve yegumbo nyama ine chikafu chepamusoro uye iri nyore kutenga pamisika kana zvitoro. Zvisinei, nyama yenguruve yegumbo zvakare iri nyore kunhuwa kana kuenda rancid, saka iwe unofanira kuisa muhomwe mamwe emamwe mazano anotevera kuti usarudze zvakanakisisa nyama yenguruve yegumbo!
Zvichienderana nendiro, unofanira kusarudza nyama yegumbo yenguruve isati yasvika kana shure, nokuti zvidimbu zviviri zvenyama izvi zvine zvimwe zvakasiyana. Gumbo repamberi rine matendon akawanda, nyama yakaonda uye shoma nekuda kwekuita kwakawanda. Zvisinei, nyama yegumbo repamberi yakanyorova uye inotapira, yakakodzera kugadzira ndiro dzakadai senyama yakabikwa, nyama yakabikwa kana kutevedzera … Kusiyana neizvi, gumbo reshure rine nyama yakawanda asiwo mafuta akawanda, nekuda kwekuita. Ichi chikamu chenyama chakakodzera kugadzira ndiro dzakadai seyakabikwa, yakakangwa, kana porridge yakabikwa, nezvimwe.
Paunenge uchitenga nyama yenguruve yegumbo, unofanira kusarudza nyama yakasimba, kunyange uye yakaoma. Iwe unogona kuedza kudzvanya pasi nyama kuti utarise elasticity yenyama.
Inofanira kutenga zvimedu zvenyama ine yakachena pink ruvara, pasina kunhuhwirira kwakashata, hove.
Kuti ubvise kunhuhwirira uye tsvina, unogona blanch mumvura iri kufashaira, kana kuzora ginger panyama wozogeza nemvura yakachena.
Digifood ichangounza kwauri gumi nzira dzekuigadzirira zvinonaka ndiro kubva nyama yenguruve gumbo. Nguruve yegumbo nyama, inonaka uye inovaka muviri, ichave chikafu chakakosha mutireyi yemhuri.
Ona zvimwe zvinonaka zvenguruve:
READ 2 Cách Làm Bim Bim Chuối Xanh Ngon Thần Sầu | Excitinghochiminhcity
← 5 điểm mua quà lưu niệm Nha Trang không nên bỏ qua | Excitinghochiminhcity
Review Thảo Nguyên Resort Mộc Châu | Excitinghochiminhcity →